Shir lagu gorfeynayo arrimo muhiim ah oo ka furmay Muqdisho – Xorriya Online
Shir lagu gorfeynayo arrimo muhiim ah oo ka furmay Muqdisho
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay Shirweynaha Qaran ee warbixinta qiimeynta khataraha lacag dhaqidda (Money Laundry) iyo Maalgelinta argagixisada.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa uga mahad celiyay Xarunta Warbixinnada Maaliyadda (Financial Reporting Centre) ee FRC howshan adag ee ay wadday labadii sano ee la soo dhaafay ee soo ururinta iyo diyaarinta warbixinta qiimeynta Khataraha Qaran iyadoo diyaarinta Warbixinta u kaashaneysa Khubaro Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka dalka ayaa sheegay in warbixintani qayb ka tahay nidaamka Deyn Cafinta dalka ee inagala dhaxeeya Hay’adaha Lacagta Adduunka Iyo Baanka Adduunka.
Mudane Mahdi Guuleed ayaa sidoo kale sheegay inay waajib tahay in aan dhammaanteen ka wada shaqeyno sidii natiijo wax ku ool ah looga gaari lahaa howshan muhiimka ah.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa si gaar ah ula dardaarmay xubnaha Guddiga Qaran ee ka hortaga Lacag dhaqida iyo La-dagaallanka Maalgelinta Argagixisada (National Anti-Money Laundry Committee) iyo Hay’adaha kale ee ku shaqada leh in ay xil iska saaraan dhamseystirka warbixinta qiimeynta khataraha Qaran ee lacag dhaqista iyo maalgalinta argagixisada.
Mudane Mahdi ayaa gabagabada u mahadceliyay Guddiga Qaran ee NAMLC iyo Xarunta Warbixinadda Maaliyadda (Financial Reporting Center) oo soo abaabushay shir weynaha qiimeynta khataraha Lacag dhaqida & Maal-gelinta Argagixisada (National Risk Assesment) iyo dhammaan hay’adihii kale oo ka soo shaqeeyey Warbixinta lagu qiimeynayo khataraha lacag dhaqidda iyo maal-gelinta argagixisada.
Xukuumadda oo jaawaab kulul ka bixisay hadal galabta kasoo yeeray musharixiinta mucaaradka
Midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay banaanbixii berri
AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyay qarax caawa ka dhacay Muqdisho
Puntland & Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkii xalay ka dhacay xabsiga Boosaaso
Waa maxay qoddobada ay isku fahmi waayeen ra’iisul wasaare Rooble iyo musharixiinta mucaaradka
Musharixiinta mucaaradka oo soo bandhigay qodobadii ay hor-dhigayn ra’iisul wasaare Rooble
Rooble oo ka hadlay fashil ku yimid shir uu xalay la yeeshay mucaaradka
Weerar ku bilowday qarax oo xalay Saqdhexe lagu weeraray xabsiga Boosaaso